Hargeysa iyo Burco oo daggan ka dib rabshadihii xalay - BBC News Somali
Hargeysa iyo Burco oo daggan ka dib rabshadihii xalay
17 Nofembar 2017
Waxaa deggan xaaladda xaafadaha ay xalay rabshado ka dheceen xalay ee ka tirsan Hargeysa iyo Burco, sida ay dad deegaanka ah u sheegeen weriyaha BBC-da ee Hargeysa, Axmed Saciid Cige.
Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland waxaa Isniintii ka dhacay doorashada madaxtinimada oo weli la sugayo natiijadeeda.
Inta la og yahay, ugu yaraan laba qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen rabshadahaasi ka dib markii ay isu soo bexeen taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani.
Gudoomiye ku xigeenka Gobolka Togdheer, Maxamed Diiriye Xayd ayaa BBC-da u sheegay in ay daggan tahay xaaladda xaafadihii ay rabshadaha ka dhaceen xalay ee Burco.
Waxay arrintani ka dambeysay markii mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Waddani ay dhaliil u soo jeediyeen hanaanka doorashada. Waxay sheegeen in ay hakiyeen wadashaqeyntii ay la lahaayeen guddiga doorashooyiinka ka dib markii "la dhagaysan waayay cabashadooda" ku aadan doorashadii la qabtay Isniintii.
Cusman Afgaab oo ka tirsan xisbiga Waddani ayaa BBC-da u sheegay "in uu jiro musuqmaasuq uu ka mid yahay in meelaha qaar lagu codeeyay warqado la been abuuray, caruur codeysay iyo in wakiilladooda laga saaray xarrumaha qaar ee codeynta".
Goobjoogayaasha caalamiga ah maxay ka dhaheen doorashada Somaliland?
Somaliland: Seddax arrimood oo doorashadan kaga duwan tahay kuwii hore
Maxaa ka dhigay doorashada Somaliland mid taariikhi ah?
Guddiga doorashooyiinka Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland, ayaa codsaday in ciddii cabasho qabta ay u gudbiyaan guddiga, sidoo kale wuxuu ku baaqay in aan laga hordhicin natiijada.
Gudoomiyaha guddiga, Cabduqadir Imaan Warsame oo xalay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay "wixii cabasho sharci ah, diyaar baan u nahay in aan xallino".
Gudiga doorashada Soomaaliland oo ka jawaabay eedaymaha uu xisbiga waddani u soo jeediyay
Balse, dadka ku nool xaafadaha dhanka galbeed ee Burco waxay sheegeen in ciidamo boolis iyo military isugu jira la geeyay halkaas.
Musharraxa xisbiga mucaaradka ee Waddani, Cabdiraxmaan Cirro ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay in ay nabadgelyada ilaaliyaan. Dhanka Booliska wuxuu ka dalbaday in ay shacabka si wanaagsan ula dhaqmaan.
Rabshada ka dhacay xaafado ka tirsan Burco waxaa "ku dhintay hal qof, tiro kalena way ku dhaawacmeen", sida uu BBC-da u sheegay gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer. Dadka dhaawaca ah waxaa ka mid ah askeri boolis ah, oo ka mid ahaa kuwii ka hortagayay rabshadaha.
Xaafadda New Hargeysa oo ka tirsan Hargeysa waxaa Iyana ku dhimatay gabar ka dib markii booliska iyo dibadbaxayaasha ay isku dheceen.
Dad badan ayaa la xirxiray ka dib isu soo baxyadaas ka dhacay xaafado ka tirsan Hargeysa iyo Burco.
10 Nofembar 2017
Tirada codbixiyayaasha Somaliland oo la shaaciyay
Beesha caalamka oo ka hadashay doorashada Somaliland
6 Oktoobar 2017
16 Nofembar 2017